Izimpawu Zomphakathi, i-SEO, kanye Nethonya Lazo Komunye Nomunye | Martech Zone
Izimpawu Zomphakathi, i-SEO, kanye Nethonya Lazo Komunye Nomunye
NgoMsombuluko, Agasti 31, 2015 NgoMsombuluko, Agasti 31, 2015 Douglas Karr
UMatt Cutts wabelane ngevidiyo lapho exoxa khona ngenselelo onjiniyela abangaba nayo uma bengadala ukuncika phakathi kwama-algorithms wezinga le-Google nezimpawu zomphakathi. Ngamafuphi, kungaba yingozi kakhulu ukwakha lokhu kuncika uma kwenzeka enye inkundla yezokuxhumana ivimba ukuseshwa noma yaziwa.
Angingabazi ukuthi kunjalo, kodwa the amahemuhemu qhubeka njengoba ochwepheshe bezinjini zokusesha bavame ukubona ukuhlangana phakathi kwezihloko zomphakathi ezihamba phambili kanye namazinga we-search engine. Njengoba uMat ephinda, lokho akuyona inkinga, noma kunjalo. Sabelane ngemicabango yethu nge umthelela wezokuxhumana ku-SEO vele, kepha ake sixoxe ngezimpawu zomphakathi nokuthi zombili zihlobene kanjani.
Abalandeli Nenani Labalandeli - Uma ngabe usungulwe ngokusemthethweni, igunya elaziwayo embonini yakho, amathuba amahle impela ukuthi ubhalwe nge-inthanethi. Mhlawumbe ukhulume emicimbini, wenza izingxoxo, wabhala izingcingo, noma wenza abantu bakhombe ngomsebenzi wakho. Noma yikuphi kwalokhu okushiwo, kunjalo, kungashayela zombili izixhumanisi eziya kuwe. Vele, lokho kwaziwa mhlawumbe kuzoshayela ukulandela okuqinile online uma usebenzisa ngenkuthalo imithombo yezokuxhumana. Ukulandela komphakathi kungaba ikakhulu Finy, okwenza lezo zibalo zingenakwenzeka ngokufakwa kokulinganiswa.
Amasheya social - Imithombo yezokuxhumana inikeza enye yezindlela eziphumelela kakhulu futhi esebenza kahle yokwabelana ngolwazi ku-inthanethi kumanethiwekhi afanele. Yabelana ngocwaningo oluyisisekelo olungajwayelekile noma isiqeshana esicindezelayo sokuqukethwe futhi ngeke umangale lapho lisakazeka njengomlilo wequbula futhi lifinyelela kubantu abaningi. Amasheya ezokuxhumana nabantu imvamisa ukuthi ngithola kanjani ngamathuluzi amasha noma ngezifundo, okuholela ekutheni ngibhale ngawo nokukhiqiza ama-backlinks. Ngenkathi amavolumu aphezulu wokwabelana nomphakathi engabangeli isikhundla, izohambisana nezinga eliphezulu.
Ngoba akukho ukuhlangana okuqondile akusho ukuthi awukho umthelela, noma kunjalo. Uma ngithola insiza enkulu noma ipulatifomu ekusesheni, ngizokwabelana ngayo kuma-akhawunti wami wezokuxhumana. Uma ngithola ithuluzi kuma-social media futhi ngilaba nezithameli zami eziningi, kungahle kuholele kuma-athikili angeziwe nama-backlinks aqhuba isikhundla. Ngakho-ke yize kungekho ukuhlangana okuqondile, kunesizathu esingaqondile isiteshi ngasinye esingaba naso kwesinye.
Ukusebenzisa zombili lezi ziteshi kuzothuthukisa imiphumela yesinye. Ungaliyeki leli thuba! Nawa amanye amathiphu amahle avela ku- Ukuhluma Komphakathi abaphathi bezokuxhumana ukuze bahambisane namasu wokusebenzisa izinjini zokusesha eziphilayo.
Ukwabelana Kwabezindaba Zomphakathi Kukhula
Hlaziya.ly usanda kukhipha umbiko wokuthi I-Facebook manje isinqobe iGoogle njengomthumeli ophezulu kubashicileli. Lokhu kwehla kubalulekile ukuthi abamemezeli bakugcine engqondweni. Uma uthela yonke imizamo yakho ekusebenziseni izinjini zokusesha namathuba e-backlink, futhi ungathuthukisi isu elihle kakhulu lezokuxhumana, amathuba okufinyelela izethameli ezintsha ayancipha.
Tags: ukusebenzisa ngokugcwele injiniseoamasiginali wezokuxhumanaisu lokuxhumana kwezenhlaloisu lokwabelana nomphakathiizimpawu zomphakathiisu lomphakathi
I-LeadSift: Thatha imininingwane yokuqonda nenokusebenziseka nge-Social Media
Isipiliyoni Seselula Nomthelela Waso Kumathrendi